wakaita mambunga nechikara kushva neshungu yekukudza buri
meno acho akanyura mumunyepfu kunge emhungu anyudurukiramo
sarei wanyechuka mavanga mukati ropa rovhinza
mukore uno wasiyana newekare weguchu
wanhasi kuasimha mapiritsi amarudzi nekuakabira
idyawo zvodya vamwe
zvokugumigwa pazhira gwendo gwevupenyu dzava ngano
zvokutambidza vapwere pakuzvara zvakapfuvura
kana zvokuparadzira pakusangana hakuchina
idngodya zvodyavo vamwe
kwete kuti uputike wega wega
idyavo zvodya vamwe!
Ndave kutya kureva nhema
Kupupura pamberi pevazhinji ndimire
Ndisina kana nyadzi ndichitaura kuti
waenda uyu waenda nenguva
kana kuti ndiko kuita kwaMwari
kwava kusimbisa vasara ndichiti
ndiyo nzira yedu tose kana nesu tichaenda
honguzve tinoti murawu
asi hazvina kumbonzi chiregai kuzvichengetedza
hazvina kumbonzi murege kuzvidzivirira
kana kurega kuzviisa pakanaka
kwete! kwete! handizvo
kana kunyepera iye satan
kumiti akauya kuba nekuparadza
ko ane zuva raakati regedza kuzvidzivirira here
dzimwe mhosva kupomera kunenge kureva nhema
kupomera neasina mhosva
Copright: Tinashe Muchuri 2016
Ndaiva padare nasekuru apo vaitaura nezvekusvika kwezuva remambure ayo vainge vandivimbisa kuti ndaizoenda kundosvayawo mhuku kekutanga mukuva kwangu mugari wenyika. Sekuru Kubvovora vaizivikanwa nevunyanzvi bwavo bwokurinda pamatumba kumambure. Mbiri yavo yainge Kumambure hakudi kupusa muzukuru. Kune miko inofanirwa kuitwa uye kuteverwa usati waenda uye uye waveyo. Mauro anoteverwa nezuva rokuenda kumambure hakuna munhu anobvumirwa kuita bonde, kudya sadza negusha. Vaibudira kumambure vaisabvumirwa kutakura mbuva kuenda kusango isiri maputi kana mutetenerwa. Kana vaveyo vaisabvumirwa kuita bonde. Vamwe vanhu vaitora kuenda kumambure senzira yekuwana kwekusasanira. Izvi vaizviita sekuti vabatwa nechabwibwi ivo vachiziva havo kuti vanoda kundoita bonde kure nevanhu. Miko iyi yainhwi ikacharikwa kwaisabuda chakanaka kumambure. Zvaigona kusakisa kuti vanhu vadzoke vakabata maoko, kana kuti vamwe vevanhu vaizokuvadzwa varwiswa nemhuka musango. Chiguri naDarambwe vakazviedza kutamba zvebon…
Zvimwe zvinhu zvinoshamisa mafambirane azvinoita. Handina ruzivo nemari asi ndakasangana nenyaya yematarenda mubhaibheri ikandibata. Zvinonzi kune umwe munhurume akapinda murwendo ndokusiya apa vashandi vake matarenda. Umwe akapiwa mashanu, umwe maviri wekupedzisira ndokupiwa rimwe. Akapiwa mashanu anonzi akandoshandisa matarenda mashanu akadzoka ava nemamwe mashanu pamusoro. Wemavirivo akanoshanda ndokudzoka ava nemana. Uyu wekupiwa rimwe akafushira pasi ndokubva rarega zvaro kubara rimwe tarenda.
Munhurume wekupinda parwendo adzoka akati kuvashandi vake huyai nezvamakashanda. Mumwe nemumwe akauya nezvaakashanda. Vamwe vakashanda vakauya nezvavakashanda vakapiwa mibairo. Uya wekusashanda akatorerwa raakanga akacherera pasi ndokunzi ibva pano haubatsiri.
Apa ndipo pakazouya nyaya yemabhangi ekuvharwa muZimbabwe. Ipapo vanhu vakatora mari yavo ndokuiisa mubhangi. Bhangi riya chiona zvarakaita. Kugarira mari yavanhu. Kufutsira mari yavanhu kwakutokanganwa nezvazvo. Vanhu nechigumbu ndoku…
Ndakarohwa nehana chose. Ndaisarohwa nehana sei ini ndakakudzwa nasekuru ndichiudzwa kuti murume haapfekedzi mwanasikana hanzu kana kumugeza chaiko. Kana mwana akaita tsvina m…